Akụkọ - Ndị isi Ejiji na Akpụkpọ ụkwụ Kpọọ oku maka "Nrube isi" Ntube Isi Nkuzi dị ka Usoro COVID-19
Ndị isi ụlọ ọrụ ejiji na akpụkpọ ụkwụ na-akpọku gọọmentị ka ha nwee usoro nduzi "agbanwe agbanwe" maka iji ihe mkpuchi ihu mgbe enwere mmụba ọhụụ na nje Corona.
N’akwụkwọ ozi o degaara Onye isi ala Donald Trump, Njikọ uwe na akpụkpọ ụkwụ ndị America - nke na-anọchite anya ihe karịrị ụlọ ọrụ 1,000 gafee United States - gbara ndị ọchịchị ahụ ume ka ha guzobe ụkpụrụ gọọmentị etiti maka mkpuchi ihu iji nyere aka na mbọ ndị na-ere ahịa iji mepee ụlọ ahịa ọha na eze n'enweghị nsogbu.
Onye isi ala na CEO Steve Lamar dere, "Ka anyị na-abanye n'ọgbọ na-esote nzaghachi na mgbake COVID-19, anyị na-eche nhọrọ dị oke egwu ihu." "Ọ bụrụ na anyị achọghị ka iji ihu kpuchie ihu anyị niile, anyị nwere ike idi nsogbu ndị ọzọ metụtara azụmahịa."
E zigakwaara ndị isi nke ndị isi nke ndị gọvanọ mba, Association of National na US Conference nke Mayors, akụkụ nke akwụkwọ ozi ahụ. Ndi AAFA rịọkwara ka Ngalaba Homeland Security's Security cyber Security and Maka akụrụngwa nchekwa eleba anya nwelite Ndụmọdụ ndị dị mkpa maka ọrụ ịgụnye akụrụngwa ndị na-eme mmegharị nchekwa dị mma, dịka omume ịgbaghari mmekọrịta ọha na eze na mmejuputa nhicha dị ọcha iji kpuchido ndị ọrụ. na ndị ahịa.
"Ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya banyere ọtụtụ ikpe na ọtụtụ amụma nke ọdịda nke ọdịda n'oge ọdịda na-egosi na ajọ ọrịa 19 ga-abụ akụkụ nke ndụ nkịtị ruo oge ụfọdụ." Lamar dere. "Zingmata eziokwu a, ma ghara ịkọwa nkọwa a, gọọmentị obodo nwere ike ịkọwapụta atụmatụ CISA iji nwetaghachi mmezu nke achụmnta ego na-abụghị naanị na-egosipụta omume kwesịrị ekwesị na-emetụta ọha na eze, mana nke na-akwado ikike nke ndị ahịa iji nweta akụrụngwa dị mkpa."
Edere leta ndị ahụ otu ụbọchị ka anyị mechara ndekọ ọzọ maka ọrịa ọhụụ 19-nke isii - naanị ụbọchị iri. Ndị ọrụ gọọmentị kọrọ ihe karịrị 59,880 ikpe na Thursday, ọtụtụ steeti na-ebute ụzọ bụ ndị mbụ na-atọhapụ mgbochi mmachi. Ruo taa, ihe karịrị nde mmadụ 3.14 nọ na mba ahụ dara ọrịa, ma ọ dịkarịa ala 133.500 nwụrụ.
Dabere na ebe a na-ahụ maka njikwa na mgbochi ọrịa, cornovirus na-agbasa site n'otu onye gaa n'ọzọ site na nsị iku ume na-amịpụta mgbe onye oria ọnụọgụ, hịara ma ọ bụ kwuo okwu. Ọ tụrụ aro ka iji masịị mee ihe n'ihu ọha na gburugburu ndị mmadụ na-ebighi n'ụlọ nke onye ezinụlọ, ọkachasị mgbe usoro ndị ọzọ na-eme ka mmadụ ghara ịdị n'otu.
Rekọtara site na FN
Oge nzipu ozi: Jul-28-2020